तनाव भयो ? कम गर्न यसो गर्नुहोस्:
आफ्नो जीवनप्रति भएका र गरेका कुनै पनि काम, कुरा र सफलता, असफलताप्रति सहमत नहुनु तनाव हो। कर्म गरेपछि परिणाम आइसक्यो र पनि स्वीकार छैन। कुनै घटना घटिसक्यो जसलाई रोक्ने सामर्थ्य हाम्रो हातमा छैन र पनि अस्वीकार छ, त्यो नै तनाव पुरा पढ्नुहोस् “तनाव भयो ? कम गर्न यसो गर्नुहोस्:”
‘मनोसामाजिक’ शब्द ‘मन’ र ‘समाज’ शब्द मिलेर बनेको छ। मन भन्नाले व्यक्तिको भावना, विचार, सोचाइ तथा धारणा बुझिन्छ। समाज भनेको व्यक्ति, परिवार, साथीभाइ, स्कुल, समुदाय र सङ्घसंस्था मिलेर बनेको हुन्छ। यसरी मनोसामाजिक शब्दले मन र समाज बिचको सम्बन्धलाई जनाउँछ।
मनोसामाजिक पुरा पढ्नुहोस् “मनोसामाजिक स्याहार”
व्यावसायिक जीवन स्वस्थ बनाउन बिहान
व्यावसायिक जीवनमा अनेक उतारचढाव आउँछन्। जसको व्यवस्थापन गर्दै सन्तुलित रूपमा दिनहरू बिताउने प्रयास गर्‍यौ भने, जीवन सुन्दर बन्छ। सुन्दर बिहानीले सुन्दर दिनको सङ्केत गर्छ, भनेझैँ व्यावसायिक जीवन स्वस्थ बनाउन बिहानको समय कसरी बिताइएको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।
बिहानको समय पुरा पढ्नुहोस् “व्यावसायिक जीवन स्वस्थ बनाउन बिहान”
व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा
आफ्नो उद्यम/व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सुरक्षा गर्नु, आइपर्न सक्ने व्यावसायिक जोखिम र स्वास्थ्य खतराबाट बचाई काम गर्ने राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नु रोजगारदाताको जिम्मेवारी हो। तसर्थ, कार्यस्थलमा घट्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरू पूर्ण रूपमा मेटाउनुहोस् वा कम गर्नुहोस्।
यसो गर्दा सम्भावित व्यावसायिक पुरा पढ्नुहोस् “व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा”
सफल जीवनका लागि स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जीवनका लागि असल खानपान
सफल जीवनका लागि स्वस्थ जीवनको निकै महत्त्व छ। जीवनमा सफलता र समृद्धि चाहने व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नै पर्दछ। स्वस्थ जीवनका लागि सन्तुलित भोजन हुन आवश्यक छ। सन्तुलित भोजन भनेको पौष्टिक पदार्थले भरिएको खानेकुरा सेवन गर्नु पनि हो।
सन्तुलित भोजनको पुरा पढ्नुहोस् “सफल जीवनका लागि स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जीवनका लागि असल खानपान”
उद्यमीहरुले Daraz मा कसरी सामान बेच्ने? असार १०, २०७९
Etds विवरण प्रविष्ट गरी आफैंले रुजु गर्ने (Self-Verify) गर्ने प्रक्रिया असार ७, २०७९
उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम जेष्ठ २६, २०७९
उद्यमी6उद्यमी यात्रा6दर्ता2कर्मचारी तालिम2व्यावसायिक योजना2ट्रेडमार्क दर्ता2कर सम्बन्धी नियम2कसरी गर्ने 1 किन गर्ने 1 व्यवसायको लेखापरीक्षण 1 दस्ताबेजिकरण 1 अभिलेखीकरण गर्दाका फाइदा 1 अभिलेखीकरण कसरी गर्ने 1 व्यवसायको अभिलेखीकरण 1 अनुपालन पात्रो बनाउनुका फाइदाहरु 1 लेखापरीक्षण 1 व्यवसायिक अनुपालन पात्रो 1 कर नतिर्दा हुने समस्याहरु 1 कर चुक्ता 1 कर 1 अनुपालन पात्रो बनाउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु 1 अनुपालन पात्रो बनाउने तरिका 1 व्यवसायको नवीकरण 1 व्यवसायिक सुशासन 1 व्यवसाय पूँजी 1 हाँस पालन 1 सरकारको बजेट 1 सीप विकास तालिम 1 युवा उद्यमी 1 सहुलियत ऋण 1 सरकारले ल्याएका राहत कार्यक्रम 1 सहुलियतपूर्ण कर्जा 1 स्वास्थ्य र सुरक्षा 1 नवीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरू 1 बिहानको समय यसो गर्नुहोस् 1 मनोसामाजिक समस्याका लक्षणहरू 1 मनोसामाजिक समस्या 1 मनोसामाजिक स्याहार 1 तनावरहित जीवन 1 तनाव कम कसरी गर्ने 1 टिप्स 1 उद्यमशीलता 1 सुशासनका फाइदा 1 मनोसामाजिक समस्याबाट बच्न के गर्ने 1 पूँजीको खोजी 1